बाइबलका कथाहरू: योना र ठूलो माछा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
पानीमा डुब्दै गरेको मान्छेलाई हेर त। लौ! उसलाई त्यो ठूलो माछाले निल्नै लागेछ! यो मान्छे को हो, तिमीलाई थाह छ? उसको नाउँ योना हो। ऊ कसरी यति ठूलो संकटमा पऱ्यो, हामी थाह लगाऔं है।
योना यहोवाको अगमवक्ता थियो। एलीशाको मृत्यु भएको केही समयपछि यहोवाले योनालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘ठूलो सहर निनवे जा। त्यहाँका मान्छेहरूले असाध्यै नराम्रो काम गरिरहेका छन्। तैंले गएर तिनीहरूलाई बता।’
तर योना त्यहाँ जान चाहँदैन। यसकारण ऊ अर्कै ठाउँमा जाने डुङ्गा चढ्छ। तर यहोवालाई योना यसरी भागेको मन पर्दैन। त्यसकारण उहाँले ठूलो आँधीबेहरी चलाउनुहुन्छ। आँधीबेहरीले गर्दा योना चढेको डुङ्गा नै डुब्ला-डुब्ला जस्तो हुन्छ। मल्लाहहरू डराएर थरथर काँप्न थाल्छन्। उनीहरू आ-आफ्ना देवताहरूलाई पुकार्दै मदत माग्न थाल्छन्।
अन्तमा योनाले उनीहरूलाई यसो भन्छ: ‘म आकाश अनि पृथ्वी दुवै बनाउनुहुने परमेश्वर यहोवाको उपासना गर्छु। उहाँले मलाई अह्राउनुभएको काम नगरेर म अहिले भागिरहेछु।’ यो सुनेपछि मल्लाहहरू उसलाई सोध्छन्: ‘अब यो आँधीबेहरी रोक्न हामीले के गर्नुपर्छ?’
योना यस्तो जवाफ दिन्छ: ‘मलाई समुद्रमा फालिदिनुहोस् र समुद्र फेरि शान्त हुनेछ।’ तर मल्लाहहरू त्यसो गर्न मान्दैनन्। आँधीबेहरी झन्-झन् जोडसित चल्न थालेपछि भने उनीहरूले योनालाई समुद्रमा फालिदिन्छन्। तुरुन्तै आँधीबेहरी बन्द हुन्छ र समुद्र पनि शान्त हुन्छ।
योना बिस्तारै पानीमा डुब्दै जान्छ। अनि उसलाई ठूलो माछाले निल्छ। तर माछाले निले पनि ऊ मर्दैन। ऊ तीन दिन र तीन रातसम्म त्यो ठूलो माछाको पेटभित्र रहन्छ। यहोवाको आज्ञा पालन गरेर निनवे गएको भए हुने रहेछ भनेर योना पछुताउन थाल्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ, तिमीलाई थाह छ?
योनाले यहोवालाई प्रार्थना गर्दै मदत माग्छ। यहोवाले माछालाई सुक्खा जमिनमा बान्ता गर्न लगाउनुहुन्छ। यसरी योना माछाको पेटबाट बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि योना यहोवाले भन्नुभएझैं निनवे सहर जान्छ। हामीले सधैं यहोवाले भन्नुभएको कुरा मान्नुपर्छ भनेर यो कथाबाट राम्रो पाठ सिक्छौं।
योना को हो र यहोवाले उसलाई के गर्न अह्राउनुहुन्छ?
यहोवाले अह्राउनुभएको ठाउँमा जान नमानेर योनाले के गर्छ?
आँधीबेहरीलाई रोक्न योनाले मल्लाहहरूलाई आफूलाई के गर्नू भन्छ?
योना पानीमा डुब्दा के हुन्छ, चित्र हेरेर बताऊ।
योना त्यो ठूलो माछाको पेटमा कति दिनसम्म हुन्छ र त्यतिखेर उसले के गर्छ?
ठूलो माछाको पेटबाट निस्केपछि योना कहाँ जान्छ र यसबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौं?
योना १:१-१७ पढ्नुहोस्।
निनवेका मान्छेहरूलाई प्रचार गर्नुपर्ने जिम्मा पाउँदा योनालाई कस्तो लागेको प्रस्टै देखिन्थ्यो? (योना १:२, ३; हितो. ३:७; उप. ८:१२)
योना २:१, २, १० पढ्नुहोस्।
यहोवाले हामीलाई प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ भनेर योनाको अनुभवबाट हामी कसरी ढुक्क हुन सक्छौं? (भज. २२:२४; ३४:६; १ यूह. ५:१४)
योना ३:१-१० पढ्नुहोस्।
योनाले आफूलाई दिइएको काम सुरुमा पूरा नगरे तापनि यहोवाले पछि पनि उसलाई जिम्मेवारी दिनुभएको घटनाबाट हामी कस्तो प्रोत्साहन पाउन सक्छौं? (भज. १०३:१४; १ पत्रु. ५:१०)
निनवे सहरमा योनाले भोगेको अनुभवबाट हामीले पनि आफ्नो इलाकाका मान्छेहरूबारे पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन भन्ने कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं? (योना ३:६-९; उप. ११:६; प्रेरि. १३:४८)